Ambasadaoro Frantsay, i Christophe Bouchard: « Hotohizana ny dinika momba ireo Nosy malagasy… » | NewsMada
Ambasadaoro Frantsay, i Christophe Bouchard: « Hotohizana ny dinika momba ireo Nosy malagasy… »
Anisan’ny nivoitra tamin’ny lahatenin’ny ambasadaoro frantsay, i Christophe Bouchard, tamin’ny fanamarihana ny fetim-pirenen’izy ireo, omaly, ny momba ireo Nosy malagasy. « Hotohizana ny fifankalozan-kevitra ialana amin’ny fifandirana momba ireo Nosy ao amin’ny lakandranon’i Mozambika rehefa miverina amin’ny laoniny izao valanaretina izao », hoy ny fampanantenany.
Hanome vola 22 tapitrisa euros
Nanteriny fa hohamafisina hatrany ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta. Manaporofo izany ny hanomezan’i Frantsa vola hatrany amin’ny 22 tapitrisa euros. « Hatokana amin’ny tranga miseho tampoka ny 15 tapitrisa euros. Ny dimy tapitrisa euros, hanatsarana ny lafiny fahasalamana eny anivon’ny fonja ary ny roa tapitrisa euros kosa, hanohanana ny Institut Pasteur amin’ny ady atao amin’ny valanaretina Covid-19 », hoy izy.
Mitondra tombontsoa betsaka ny orinasa frantsay
Notsindriny fa hihamafy orina anaty fifampitokisana sy fifanajana ny fiaraha-miasan’ny firenena tonta ary hiaraka hiatrika ny fanambin’izao taonjato izao. Notsiahiviny ny nandalovan’ny minisitray ny Raharaham-bahiny frantsay i Jean-Yves Le Drian, teto amintsika ny volana febroary teo. « Midika ho fahavononana hatrany ho amin’ny fiaraha-miasa izany. Eo koa ny tantara iombonana… », hoy ihany izy.
Tsiahivina fa anisan’ny iarahana miasa amin’i Frantsa ny lafiny angovo, toy ny any Sahofika sy any Ivoloina. Eo ny fanabeazana sy ny fampianarana ary koa ny kolontsaina…